Fanamby sy fanararaotana ny fizarana fizarana varotra | Martech Zone
Alatsinainy Desambra 14, 2015 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Manantena ny mpanjifa ny fanandramana manokana ary ny mpivarotra dia mahita mazava ny fotoana azo atao amin'ny fizarana marketing sy ny personalization. Raha ny marina, ny programa fampahalalam-baovao natao manokana dia nihatsara ny tahan'ny valiny, nampitombo ny varotra ary ny fahatsapana marika matanjaka ho an'ny 48% an'ny mpivarotra. Ny mailaka manokana dia mitarika in-6 ny tahan'ny valiny mihoatra ny mailaka mahazatra sy ny paikadim-pitantanana matanjaka manerana ny fantsona afaka manome 5 ka hatramin'ny 8 heny ny ROI amin'ny fandaniana amin'ny marketing.
Inona ny fizarana tsena
Ny segmentation dia ny fizarana ny mpanjifa-toeran-tsena na ny tsenanao ho avy ao anaty vondrona voafaritra izay manana demografika, filàna, fahalianana, laharam-pahamehana ary / na toetra isam-paritra. Ny segmentation dia ahafahan'ny mpivarotra mampihatra paikady manokana izay tena misy ifandraisany sy kendrena amin'ny vondrona tsirairay - mampitombo ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny ankapobeny.
Satria ny 86% -n'ny mpanjifa dia milaza fa ny personalization dia mitana anjara toerana amin'ny fanapaha-kevitr'izy ireo amin'ny fividianana, nahoana ny mpivarotra no miady mafy amin'ny fizarazarana sy ny fanaovana azy manokana?
36% amin'ireo mpivarotra no mitatitra fa fanamby ny fanaovana manokana ny hafatra manerana ny fantsona.
85% ny marika milaza fa ny paikadiny # segmentation dia mifototra amin'ny clustering malalaka sy tsotra.
Latsaky ny 10% amin'ireo mpivarotra ambaratonga ambony no milaza fa mahomby be amin'ny # personalization.
35% amin'ireo mpivarotra B2C no nilaza fa ny fananganana fomba fijery tokana ny mpanjifa tsirairay manerana ny fantsona dia fanamby goavana.
Amin'ity sary ity, Kahuna antsipirihany ny fizarana sy ny personalization dia tsy hoe manana-manana fa tsy maintsy ilaina, ny fiverenana avy amin'ny famindrana mihoatra ny fizarana tsotra loatra, ary inona no mampihemotra ireo mpivarotra.
Momba an'i Kahuna
Kahuna dia sehatra automatique fifandraisan-davitra izay mampiasa tahirin-tsokosoko manankarena hamoronana sy handefasana hafatra manokana amin'ny ambaratonga. Mampiasà fantsom-pifandraisana, mailaka, fampiharana ary fifandraisana sosialy hifandraisanao amin'ny mpanjifanao rahoviana ary aiza no mety hirotsahan'izy ireo.
Tags: kahunafizarana tsenafizarana marketingpersonalizationpersonalization infographicsegmentationsegmentation infographiclasibatra
Dimension 5 amin'ny fahombiazan'ny varotra marketing